नयाँ सालमा बिहे गर्नेलाई रोजी-रोजी लगन :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
नयाँ सालमा बिहे गर्नेलाई रोजी-रोजी लगन २४ फागुन, काठमाडौं । फागुनमा विवाहको लगन नभएकाले विवाहको सुरसार गरेर बसेका धेरैलाई बैशाखसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हुन त लगनबिना विवाह गर्ने चलन पनि छ । तर, लगनबिनाको विवाह फाप्दैन भन्नेहरुले लगन नै पर्खन्छन् । यसरी लगन नै पर्खेर बस्नुभएको छ भने ढुक्क हुनुहोस्, बैशाखपछि तपाईंलाई विवाहका लागि रोजी-रोजी प्रशस्त लगन मिल्ने भएको छ ।
यसवर्ष अर्थात ०६९ सालमा शुक्र अस्तका कारण जेठ र फागुनमा विवाहको लगन थिएन । विवाहको लगन भएका बैशाख, असार, मंसिर र माघमा पनि थोरै मात्र लगन थिए । बैशाखमा १ दिन, असारमा ४ दिन, मंसिरमा ५ दिन र माघमा १० दिन मात्र लगन हुँदा धेरैतिरको विवाह एकैदिन पर्यो । जसका कारण विवाह गराउने पुरोहित मात्र होइन, निम्ता मान्नेहरु पनि कसकोमा जाने, कसकोमा नजाने भनेर हैरान भए ।
आउँदो वर्ष विवाह हुने ६ वटै महिनामा प्रशस्त लगन जुरेका छन् । ०६९ सालमा जम्मा २० दिन मात्रै लगन थियो । तर, ०७० सालमा भने विवाहको लागि ५२ वटा दिन जुरेका छन् । यसबाहेक दशैंको टीका र श्रीपञ्चमीको दिन लगन नभएपनि विवाह गर्ने चलन छ ।
13 Comments on “नयाँ सालमा बिहे गर्नेलाई रोजी-रोजी लगन”
gorkha tiger wrote on7March, 2013, 9:41
Ma Pani feri bihe garu ki ke ho?
Like or Dislike:92[जवाफ फर्काउनुहोस्]subhash Reply: March 7th, 2013 at 4:05 pmBholi Naari Diwas ho !!! Dohoro biwah garda mudda ko chakkar ma parla nee sathi… ha ah ah
suresh wrote on7March, 2013, 9:45
k garne pheri bihe garum bhane bhudi le marchhe bhare bhudi lai phakaunu parla
suresh wrote on7March, 2013, 9:47
mero sathi u ko biha6 aba lagan bhari vivaha garna sallaha dinu paryo ki kaso
ajashajsh wrote on7March, 2013, 10:11
yes pali beha garnu parxa ke ka ho…………lagan ta tanny raixan
Rohan wrote on7March, 2013, 11:20
kamal salyani wrote on7March, 2013, 14:06
abata ta mansir ma bibaha garnuparyo kayre
juna nath sapkota wrote on7March, 2013, 15:10
gf vaya po lagan,afu lai ta kehi na kehi
Hasilo Thito wrote on7March, 2013, 15:15
Naya barsa ma tannai vooj khana paine vayooo…
PRABEENNN GRG wrote on7March, 2013, 15:45
लगन त प्रसस्तै रहेछ तर पिर त मन परेको लाई अरुलेनै उडउछ कि भनेर सतायो त हौ— तोरी लाहुरे…………….
Suryaman wrote on 8 March, 2013, 3:07
Aarko saal prasuti griha ma bhid hune bhayo.
chaudhari harshit wrote on 8 March, 2013, 9:05
hhahah ho ra mero pane testai 6a ………..:)
Iishor wrote on 8 March, 2013, 23:08
Lagan tannai rahecha aba chahi chani chani bihe gare huncha shathiharu